Accueil > Gazetin'ny nosy > Kolikoly : Tsy afaka koa i Rajao sy Mahafaly
Kolikoly : Tsy afaka koa i Rajao sy Mahafaly
Matetika dia mandeha ila toa ny kiraron’i Beminaha ny raharaha fanadihadiana sy fisamborana olona eto Madagasikara. Tsy tonga hatrany amin’ny farany ny fanadihadiana dia ajanona, na koa iniana tsy tohizina mba tsy hahavoarohirohy ny olona tiana higadra.
Porofo miharihary amin’izany ny raharaha Claudine Razaimamonjy izay efa ho roa taona ao am-ponja amin’izao fotoana izao. Tsy misy voakitikitika na kely aza ireo olona rehetra izay nahatonga ny fahazoan’ity olona ity ny vola azony tao amin’ny tahirim-bolam-panjakana ka nanomezana azy ankahalalahana izany fa ramatoa Claudine Razaimamonjy irery ihany no nogadraina. Misy nefa ny antsoina hoe “acteurs budgetaires” na ireo mpikirakira ny antontan-taratasy maro ary tsy maintsy mandalo amin’ny tompon’andraikitra mikirakira ny vola no tsy maintsy diavina vao mivoaka ao amin’ny tahirim-bolam-panjakana (Trésor) ny vola amin’ireny tolotrasa sy tetikasa ireny.
Aiza ny minisitra izay antsoina hoe “ordonateur secondaire” ka tsy maintsy manao sonia ny tetikasa no tsy nampiantsoana ? Aiza ny PRMP na ny “Personne responsable du marché public” izay mamoaka ny olona mahazo ny tolotrasa na ny “marché” ? Aiza ny “Contrôles financiers” misy maromaro izy ireo, izay tsy maintsy manara-maso ny fanarahan-dalàna amin’ny antontan-taratasy mahakasika ny asa ? Dia mbola misy koa ireo mpanamarina ny asa vita. Ary farany dia ny ao amin’ny “Trésor” izay mpandoa vola ka tsy afaka mamoaka izany vola izany raha toa ka tsy voamarina fa ara-dalàna avokoa ny antontan-taratasy teo aloha ireo.
Sokajin’olona dimy raha kely indrindra no manamarina ny asa ataon’ny orinasa iray vao mivoaka ny vola. Olona maromaro no tsy maintsy manatanteraka ireo. Koa nahoana ary no i Claudine irery no nogadraina nefa maro ireo olona tompon’andraikitra mivantana amin’ny kolikoly avolenta toa ireny. Hatrany amin’ny minisitra izany ka tonga hatrany amin’ny mpamoaka vola ao amin’ny Tahirim-bolam-panjakana.
Tsy misalovana ny asan’ny mpanao fanadihadiana izahay fa resaka fenitra tsy maintsy andehanana ireo voatanisa ireo raha toa ka hijery ny tena marina na hiady amin’ny kolikoly ny firenena.
Maro dia maro ny tranga nitranga tato anatin’ny telo volana izao mahakasika ny kolikoly sy ny fanodinkodinana volam-panjakana. Ny mahagaga dia olona iray hatrany no voasambotra amin’izany fa ny olona tompon’andraikitra amin’ireny raharaha ireny rehetra dia miriaria sy tsy voakitikitika mihitsy amin’izao fotoana izao.
Koa satria ary kolikoly mahakasika ny fifidianana ny lalànam-pifidianana tao amin’ny depiote 79 no maresaka ankehitriny, izay nitranga teny amin’ny Paon d’Or ny faha 8 martsa 2018 ka hatramin’ny 3 aprily 2018. Voalaza fa nandray vola 50 000 000 ariary (50 millions d’ariary) ireo depiote ireo mba hampandany iny lalàna iny.
Iza ary no nanome ny vola ho an’ireto depiote ireto, ka nahatonga iny kolikoly avolenta iny ?
Mazava ny valiny. Ny mpikambana tao amin’ny governemanta HVM na ny antoko Hery vaovao ho an’i Madagasikara izay ingahy Hery Rajaonarimampianina no mpanorina azy ary filoham-pirenena tamin’izany andro izany ary mpiaro voalohany iny lalàna iny. Manampy azy ny praiminisitra filohan’ny governemanta ingahy Mahafaly Olivier Solonandrasana sy ny minisitra niaraka taminy. Ireo olona ireo no nanana tombotsoa manokana tamin’iny raharaha iny ary afaka namory ireo depiote 79 ireo. Ny lalàna eto amintsika dia milaza fa ny mpanome sy ny tolorana dia samy sazian’ny lalàna avokoa.
Noho izany dia tsy afa-maina amin’iny kolikoly avolenta teny amin’ny Hôtely Paon d’Or teny Ivato Talatamaty iny ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena teo aloha ary ingahy Mahafaly Olivier Solonandrasana sy ny minisitra maro tao amin’ny governemanta tamin’ireny fotoana ireny.
Raha tena hiady marina amin’ny kolikoly ny fanjakana Andry Nirina Rajoelina dia tokony hiditra lalindalina kokoa amin’ny fanadihadiana. Ary tsy tokony hijanona amin’ny raharahan’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ihany fa hatrany amin’ny fanjakana Tetezamita sy ny fitondran’ingahy Ravalomanana Marc koa. Maro ny tranga maloto nisy tamin’ireny fotoana ireny ary nahatonga ny firenena mahantra be tahaka izao.